ओली तिरै फर्किए यी ५ नेता, निकाले यस्तो बिज्ञप्ति ! - Rising Dainik
April 7, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ओली तिरै फर्किए यी ५ नेता, निकाले यस्तो बिज्ञप्ति !
काठमाडौं – नेकपा एमालेका दुईजना नेताले माधव नेपाल पक्षको वागमती प्रदेश समानान्तर कमिटीमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । वागमती प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका डा.रामकुमार अधिकारी र संविधानसभा सदस्य धनवहादुर घलेले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत समानान्तर कमिटीमा नाम राखिएकोमा असहमति जनाएका हुन् ।
धादिङबाट २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित घले र २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका अधिकारी नेकपा विभाजनको बेला प्रचण्ड(माधव पक्षमा थिए ।
मंगलवार घोषणा भएको माधव नेपाल पक्षको प्रदेश कमिटीमा घले र अधिकारीलाई पनि सदस्य राखिएको छ । उनीहरु दुवैजनाले समानान्तर कमिटी गठन गरि एमालेलाई कमजोर पार्ने गतिविधिप्रति आ’पत्ति रहेको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–विभिन्न सामाजिक सञ्चालमार्फत आएको जस्तो नेकपा एमाले वागमती प्रदेश कमिटीको समानान्तर कमिटीमा हामी दुईजना समेत सदस्य रहेको भन्ने सुन्नमा आएकाले उक्त प्रदेश कमिटीमा हामी नरहेको नभएको व्यहोरा जानकारी गर्दछौं ।
विज्ञप्ति पार्टी एकता जोगाउन पर्नेमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने जस्तो अनौठो निर्णयप्रति असहमति जनाइएको छ । उनीहरुले यसलाई एमाले कमजोर पार्ने गतिविधि भनेका छन् ।
कस्तो अवस्थामा जान्छ पद
संघ, प्रदेशमा निर्वाचित सांसदको हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३१ मा संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्यले सांसद पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उमेदवार भई निर्वाचित भएको हो
त्यो दल त्या’ग गर्न सक्ने÷नसक्ने उल्लेख छ । तर, दफा ३१ को १ अनुसार सो अवधिमा दल त्यागे, दल त्यागेको मितिदेखि सांसद पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।
सोही विवरणका आधारमा दलको दफा ३२ को २ अनुसार केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ । यसरी निष्कासित सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासनमा परेको मानिनेछ ।
यस्तो छ का’रबाही प्रक्रिया
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार का’रबाहीका लागि स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए दलले कारबाही गर्न सक्नेछ । “यी जुनसुकै अवस्थामा पनि पार्टीले स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ ।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भने त्यस्तो निर्णय उल्लंघन गर्ने सांसदहरुको विवरण सचेतकले दलको नेतालाई दिनुपर्छ । दलको नेताले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राख्ने र बहुमतले दल त्या’ग गरेको निर्णय गर्ने,” उनी भन्छन् ।
कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । “त्यसको सूचना संसद् सचिवालयलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । संसद् सचिवालयले सभामुखलाई जानकारी दिएपछि सभामुखले त्यसको १५ दिनभित्र बैठक चलेको भए बैठकमा पढेर सुनाउनुपर्छ । नचलेको भए सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ।
आमहडतालवि’रुद्ध महेश बस्नेतको नेतृत्वमा प्र’दर्शन
#ब्रेकिङ्ग न्युज सर्वोच्च अदालतले ब्यूँ’ताइदियो एमाले र माओवादी केन्द्र, सुर्य एमाले, माओवादी केन्द्र प्रचण्डको हुने !
March 7, 2021 Ramash Kunwar
दसैँको टीका छाडेर आँसु खसाल्दै मुग्लान लागे नेपाली